Puntland oo beenisay inuu jiro wada-hadal dhexmaray iyaga iyo Galmudug (DHAGEYSO) - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Puntland oo beenisay inuu jiro wada-hadal dhexmaray iyaga iyo Galmudug (DHAGEYSO)
Waxaa maalmihii ugu dambeysay soo baxaayay warar ay baahiyeen qaar kamid ah warbaahinadda Soomaalida oo lagu sheegay inay jiraan wada-hadal iyo heshiis dhexmaray maamulada Puntland iyo Galmudug.
Wasiirka deegaanka maamulka Puntland Cali C/laahi Warsame oo ka jawaabay arrintaasi ayaa ku sheegay mid been abuur ah islamarkaana aanay jirin wax wada-hadal ah oo dhexmaray labada dhinac, balse ay tahay mid ay warbaahinta qaarkood u baahiyeen si mas’uuliyad darro ah.
Sidoo kale, wasiirka ayaa sheegay in albaabka wada-hadalku furan yahay, islamarkaana aysan Puntland diidin wax nabad ah, si xal loogu helo dhibaatada soo noq-noqotay oo ka taagan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
“Ma jirto wax wada-hadal iyo heshiis oo ay Puntland la gashay Galmudug, warkaasi ay saxaafadda sii deysay ma aqaano meesha laga keenay, waxaana arrinkaan oo dhan ka dambeeyay dadka muraayadaha gadaashood wax ka qoraya ee website-yadda leh, hadii nabadda Gaalkacyo laga hadlaayo, waxaa go’aankeeda iskaleh reer Gaalkacyo” Sidaas waxaa yiri wasiirka deegaanka Puntland Cali C/laahi Warsame.
Dhinaca kale, waxa uu wasiirka ka hadlay cidda rasmiga ee barakicineeysa dadka ku sugan magaalada Gaalkacyo, isagoona meesha ka saaray in Gaalkacyo ay tahay meel colaado ay ka jiraan.
“Magaalada Gaalkacyo waa caadi, noloshuna waa caadi, suuqayadu waa furan yihiin, isbitaaladu waa shaqeynayaan, hoteelada waa shaqeynayaan, waana la ogyahay cidda qixineeysa oo magaalada weerarka kusoo qaada, annagu Galmudug weerar kuma nihin hadii aysan iyagu weerar nagu aheyn” Ayuu hadalkiisa ku daray wasiirka deegaanka maamulka Puntland Cali C/laahi Warsame.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka kasoo yeeray wasiirka deegaanka Puntland Cali C/laahi Warsame ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeysay ay warbaahinta qaarkood shaaciyeen inuu jiro wada-hadal dhexmaray maamulada Puntland iyo Galmudug, oo ay ku kala saxiixdeen dhowr qodob oo aysan Puntland jecleysan.